Flim2MM: The Godfather I (1972)
တခုအရင်ပြောဦးမယ်ဗျာ IMDB မှာ rating အများဆုံးရတဲ့ဇာတ်ကားဆိုရင် လူတော်တော်များများက The Godfather လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ် IMDB 9.2 နဲ့Top 1 နေရာကို ယူထားတာ နှစ်အတော်ကြာနေပါပြီ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း ဒီလိုကားမျိုးကို ပြန်ချင်လွန်းသော်လည်း ၃နာရီနီးပါး ရှည်လျားသည်ကတကြောင်း၊ ပြန်စရာကားအသစ်များရှိနေခြင်းကတကြောင်းတို့ကြောင့် လုံးဝမလှည့်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီ ဂန္တဝင်ဇာတ်ကားကြီးကို မျက်စောင်းခဲနေရင်း flim2mm translator group ထဲမှ ဝါသနာကြီးတဲ့ ညီငယ် Marshal Nay Win က သူ့ဆီမှာ God Father 1 ပြန်ပြီးသားရှိတဲ့အကြောင်း၊ တင်ချင်ရင်ပေးမယ့် အကြောင်းဆိုလာတော့ ဘိုပြောရမလဲပေါ့နော်.. တင်သည်ပေါ့... ။ ဆိုဒ်အကြီးနဲ့ ဆိုဒ်အသေးဆိုပြီး နှစ်ခုတင်ထားပေးပါတယ်။ The Godfather ဟာ ဇာတ်ကား သုံးပိုင်းရှိပြီး ဒီပထမဆုံးဇာတ်ကားကိုပင် အချိန်တလလောက်ယူပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းပြန်ရသော Marshal Nay Win ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောပါရစေ။ ဆက်လက်ပြီး The Godfather2နဲ့3ကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုပါက ၄င်းအား ပူဆာနိုင်ပါကြောင်း....
The Godfather ရုပ်ရှင်ကို ယနေ့ ဥရောပ နိုင်ငံတချို့ရဲ့ စာသင် ကျောင်းတွေမှာ ၉-တန်း၊ ၁၀-တန်း ကျောင်းသားတွေအတွက် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်ခန်းစာအတွင်း ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။
မြန်မာ ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်အတွက်တော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ မားဖီးယား ဒုစရိုက်ဂိုဏ်းကို မိသားစု အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်း အာဏာယူတယ်လို့ အကြမ်းဖျဉ်း သတ်မှတ်တဲ့သူ များပါတယ်။
ညီအကို အရင်းအခြာ အချင်းချင်း၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းအတွင်း ပါဝင်လို့ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများကတော့ သဘော မကျဘူးလို့ ဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ
The Godfather Part I – 1972
တို့မှာ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်လောက က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ရုပ်ရှင်ကြည့် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသဲစွဲ ရုပ်ရှင်ပါ။
ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်က နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ စီးပွားရေး အကျော်အမော် တွေ၊ ပညာရှင် တချို့ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်ခွေအဖြစ် ၀ယ်ယူ သိမ်းဆည်း ပြီး နှစ်ပတ် တစ်ကြိမ်၊ တစ်လ တစ်ကြိမ်လောက် ထပ်ခါတလဲလဲ ကြည့်
ရှုတယ်လို့ မှတ်တမ်းများက ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလောက် ရက်စက်မှုတွေပါဝင်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းအတွဲဟာ စာသင်ခန်းထဲကို ဘာကြောင့်များ ရောက်လာသလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိပါတယ်။
အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပေးတဲ့ ကျောင်းဆရာများရဲ့ အဖြေက … ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဇာတ်လမ်းအတွင်း ရက်စက်မှုတွေ၊ ကြေကွဲမှုတွေ အပြည့်နီးပါး ပါဝင်ပါတယ်၊ ညီအကို အရင်းအခြာ အချင်းချင်း၊ မိတ်ဆွေ အချင်းချင်း၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကို လက်နက်
အသုံးပြုပြီး မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက် ဥပဒေဘောင်အပြင်ကနေ အကွက်ချ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်တာတွေ ဒီရုပ်ရှင်မှာ ရှိပါတယ် …. သို့ပေမယ့် …. မိသားစုတစ်စုကို ဦးဆောင်သူ၊ မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့ အနာဂတ်ကို ဦးဆောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရဲတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ရဲရင့်ပြီး ပြတ်သားတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေလည်း ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်၊အန္တရာယ် ဖြစ်လာစေမယ့် ပြိုင်ဖက်တွေ၊ သစ္စာဖောက်တွေ၊ ပြီးတော့ အလုပ်မှာ တာဝန်မကျေတဲ့ သွေးသားအရင်းအခြာတွေ အဖွဲ့အစည်း တွေကို ဘယ်လို ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ယူရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်၊ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ တိုင်တာပြီး ဆုံးဖြတ်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဆိုးဝါးမှာပါ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ သင်ခန်းစာအတွက်တော့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ တော်တော်ကိုး အသုံးဝင်ပါတယ် … လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ယနေ့ အနောက်ကမ္ဘာရဲ့ ဘာသာတရား ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ အရေအတွက် လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းလာမှုတွေ အကြားစီးပွားရေး ရပ်တန့်နေမှုတွေ၊ စီးပွားရေး ရိုက်ခတ်မှုတွေကို နောင်အနာဂတ်မှာ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရမယ့် ကျောင်းသားလူငယ် တွေရဲ့ စာသင်ခန်းထဲမှာတော့ The Godfather ရုပ်ရှင်ဟာ မားမားမတ်မတ် အောင်ပွဲခံလျက် ရှိပါတယ်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေရော ဒီရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲ (၃)ခွေကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့အခါ ဘယ်လိုများ ခံစားရပါသလဲ ….
[FILE SIZE]:……………………….:[ Large- 1 GB , Small- 591 MB
[RESOLUTION]:………………….:[ 1280 x 720, 640 x360
[RELEASE RUNTIME]:………………….:[2h 55mins
Posted by Y Junction at 4:24:00 AM
Myint Myat Ag February 21, 2017 at 5:42 AM
I can't get pcloud link. Premium Permission requesting